आज मतदान : देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३५,२२१ पदका लागि एक लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार
भक्तपुरस्थित ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेजमा तयार पारिएको मतदानस्थल । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
हिमाल पौडेल नयाँ पत्रिका
२०७९ बैशाख ३० शुक्रबार ०६:०६:००
हिमाल पौडेल, नयाँ पत्रिका
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७९ मध्ये ६५ दल चुनावी मैदानमा
निर्वाचनमा १,०९,०८८ कर्मचारी परिचालन । ६५,८६५ स्वयंसेवक र ५,००० पर्यवेक्षक
विभिन्न पदमा ३९० जना निर्विरोध, ६ वडाध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्विरोध
२९३ मेयरका लागि ३,२३८ को उम्मेदवारी, त्यसमध्ये १,२४५ स्वतन्त्र
४६० अध्यक्षका लागि १,९६४ को उम्मेदवारी, ३०५ स्वतन्त्र
उपमेयरका उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा ३ जेठमा मतदान
देशभरका सात सय ५२ स्थानीय सरकारको नेतृत्व छान्न शुक्रबार मतदान हुँदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपश्चात् दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । उपप्रमुखको उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा भने ३ जेठका लागि निर्वाचन सारिएको छ ।
निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र तय भएका छन् । देशभर ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार पाँच सय ३० महिला र एक सय ८३ अन्य गरी कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतदानपूर्वका सम्पूर्ण तयारी सकिएको तथा मतदानलगत्तै मतपेटिका ढुवानी हुने र मतगणना सुरु हुने जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारी पूरा भएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगले जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदानपूर्वका काम सकिएको र अब मतपेटिकामा मत खसेपछि मतगणनाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘सात सय ५३ स्थानीय तहकै निर्वाचन भने पनि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा उपप्रमुख पदको उम्मेदवारको मृत्यु भएकाले त्यहाँ कानुनबमोजिम जेठ ३ गतेलाई सारिएको छ । यसबाहेक सात सय ५२ स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रबार नै सम्पन्न हुनेछन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगिसक्नुभएको छ । मतदाता परिचयपत्र वितरण र मतदानस्थल निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षाका सबै काम भइसकेका छन्, आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री पुगिसकेका छन् ।’
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि एक लाख नौ हजार ८८ कर्मचारी परिचालन भएका छन् । यसबाहेक ६५ हजार आठ सय ६५ स्वयंसेवक र पाँच हजार पर्यवेक्षक पनि खटिएका छन् । मतदाता परिचयपत्र नभए पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नागरिकले नागरिकता, राहदानीजस्ता सरकारी निकायबाट जारी भएका परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिक मतदाताको सूचीमा रहेको आयोगको भनाइ छ ।
सरकारले गत २४ माघमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा एकैचरणमा गर्ने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । देशभर ८९ हजार तीन सय १३ पुरुष र ५५ हजार ६ सय ९८ महिला गरी कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाको विभिन्न पदमा उम्मेदवारी परेको छ । जम्मा ३५ हजार दुई सय २१ पदमध्ये तीन सय ९० पदका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा ७९ दल दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ६५ दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । १४ दलले भने कुनै पनि उम्मेदवार उठाएका छैनन् । आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छापेको छ । २५ चैतदेखि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको थियो ।
‘एसके– ३०८१ स्पेक्ट्रम बाइट ग्रिन’ रङको मतपत्र
अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा मतपत्रमा दलहरूको निर्वाचन चिह्न राखिएको छ । जसअनुसार पहिलो नम्बरमा एमालेको निर्वाचन चिह्न छ । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका निर्वाचन चिह्न छन् । त्यसपछि जिल्लामा सक्रिय रहेका दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा दलहरूको निर्वाचन चिह्न र त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि चिह्न छन् । कुल २३ लहर समूहका १६ देखि ६४ लहरका जिल्लाअनुसार फरक–फरक मतपत्र छन् । त्यसैगरी स्वस्तिक छापको रङ नीलो रहेको छ ।
६ महानगर र ११ उपमहानगरमा धेरैको चासो
६ महानगर र ११ उपमहानगरमा धेरैको चासो छ भने प्रतिस्पर्धी दलहरूले शक्ति परीक्षणको थलो बनाएका छन् । केन्द्रीय तहबाटै तालमेल र उम्मेदवारी चयन भएकाले महानगर र उपमहानगरलाई प्रमुख दलहरूले प्रतिष्ठा बनाएका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनबीच सबै महानगर र उपमहानगरमा तालमेल छ । एमालेले उपमेयर दिएर भरतपुरमा राप्रपासँग र वीरगन्जमा लोसपासँग तालमेल गरेको छ । कांग्रेसलाई काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर र भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगरमा उपमेयर, माओवादीलाई भरतपुरमा मेयर र ललितपुरमा उपमेयर, एकीकृत समाजवादीलाई पोखरामा मेयर र काठमाडौंमा उपमेयर तथा जसपालाई वीरगन्जमा मेयर र विराटनगरमा उपमेयर रहने गरी सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले सिट बाडँफाँड गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपमहानगरतर्फ कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी र तुलसीपुर उपमहानगरको मेयर र जितपुर–सिमरा, घोराही, हेटौँडा र जनकपुर उपमहानगरको उपमेयर पाएको छ । माओवादीले जितपुर–सिमरा र घोराहीमा मेयर तथा धरान र धनगढीमा उपमेयर पाएको छ । एकीकृत समाजवादीले हेटौँडामा मेयर र इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा उपमेयर लिएको छ । जसपाले जनकपुरमा मेयर तथा कैलया र नेपालगन्जमा उपमेयर पाएको छ ।
०७४ मा एमालेले काठमाडौं र पोखरा, कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, माओवादीले भरतपुर तथा जसपाले वीरगन्ज महानगरमा जित हात पारेका थिए । त्यसैगरी, उपमहानगरतर्फ एमालेले धरान, इटहरी, जितपुर–सिमरा, हेटौँडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर, कांग्रेसले कलैया र धनगढी, जसपाले जनकपुर र राप्रपाले नेपालगन्जमा जित निकालेका थिए । तर, ०७६ मा भएको उपचुनावमा भने धरान कांग्रेसको पोल्टामा गएको थियो ।
६५ देखि ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुन्छ भन्ने अनुमान छ
दिनेश थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
शुक्रबार मतदान हुँदै छ, पूर्वतयारीका काम अझै बाँकी छन् कि सकिए ?
स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहकै निर्वाचन भने पनि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकाको उपप्रमुखका उम्मेदवारको मृत्यु भएकाले त्यहाँ कानुनबमोजिम जेठ ३ गतेलाई सारिएको छ । यसबाहेक सात सय ५२ स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रबार नै सम्पन्न हुनेछन् । निर्वाचन तयारीका लागि तथ्यांक पनि लिइसकेका छौँ । सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगिसक्नुभएको छ । मतदाता परिचयपत्र वितरण र मतदानस्थल निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षाको अनुभूति दिने सबै काम भइसकेका छन् । आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री पुगिसकेका छन् । अब मतपेटिकामा मत खसेपछि मतगणनाको तयारी अवस्थामा छौँ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कडा बनाए पनि उल्लंघनका घटना धेरै देखिए, मौन अवधिमा समेत मतादाता प्रभावित पार्ने गतिविधि भए । आयोग कहाँ चुक्यो ?
हामीले आचारसंहिता बनाउँदा जसको सहयोग प्राप्त गरेका थियौँ, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि लगायौँ । तर, जसले बनायो र प्रतिबद्धता जनायो उसैले इमानदारिता नदेखाइदिएका थुप्रै उदाहरण रहे । यसमा आयोग लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छैन । निर्वाचन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । यसलाई स्वस्थ नै बनाउनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आदर्श र मूल्य नबुझ्नेहरू नै यसमा लज्जित हुनुपर्छ । मौन अवधिको समयसम्म आइपुग्दा आयोगले विभिन्न दल, संस्था र व्यक्ति गरी झन्डै ६० भन्दा बढी स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण कारबाही नभई त्यसको प्रक्रिया हो । स्पष्टीकरणका आधारमा सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने, दण्ड–जरिवाना गरिएको छ ।
देशव्यापी रूपमा हेर्दा भित्तेलेखन, पर्चा–पम्प्लेटको प्रयोग लगभग शून्य नै छ । जति भए पनि स्थायी रूपमा भएनन्, मौसमी पाराका मात्रै देखिए । तत्काल देखाउने र देख्छ कि भनेर लुकाइहाल्ने मात्रै भए । यो लोकतन्त्रमा पाच्य हुने विषय होइन । मौन अवधिमा आयोगले सूक्ष्म रूपमा टोली खटाएर सूचना संकलन गरिरहेका छौँ । कतिपय स्थानमा भएका आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरू स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाहीको दायरामा आइरहेका छन् ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगकै कमजोरी छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?
सबैको चासो निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो नहोस् भन्ने नै हो । यस्ता गुनासा आममानिसले निर्वाचन आयोगप्रति गरेको भरोसा र आयोग बलियो हुनुपर्छ भन्ने चाहनाका रूपमा लिएका छौँ । तर, प्रक्रिया निश्चित गतिमा हिँड्छ । सामान्यतः स्पष्टीकरण सात दिनको सोधिन्छ । तर, सात दिनमा त निर्वाचन नै सकिने अवस्थामा २४ घन्टे स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ । कारबाही चुनाव सकिएपछि पनि हुन्छ । सबैको चाहना गलत गर्ने मान्छेले कुनै पनि बाहनामा उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने नै हुन्छ । हामी प्रक्रिया पुर्‍याएर कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैनौँ । कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने उसले गरेको कसुरको मात्रा र जवाफमा भर पर्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न नहुने खर्च गर्ने, त्यसलाई हटाउनका लागि फेरि थप गर्न नपर्ने खर्च गरेर हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि प्रिय होइन ।
जम्मा मतदाताको २५ प्रतिशत उपस्थित हुनुहुन्न कि भन्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति पनि सोचेअनुसार सहभागी हुन सक्नुहुन्न कि भन्ने लागेको छ । मौसमले पनि केही असर गर्छ कि ! समग्रमा ६५ देखि ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुन्छ भन्ने आकलन छ ।
जिल्लामा भएका नमुना मतदानमा ७७ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको देखियो । मतदाता शिक्षा नपुगेको देखियो नि ?
यसमा तीनवटा कारण छन् । पहिलो, मतपत्र अलिकति क्लिष्ट छ । उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेपछि पदअनुसारका छुट्टै मतपत्र छाप्न सक्ने हो भने ठूलो शिक्षा दिइरहनुपर्दैन । त्यसो गरेको अवस्थामा बदर मत एक प्रतिशतबाट तल झर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशतर्फको मतदानको प्रकृति हेर्दा बदर मतको प्रतिशत कहालीलाग्दो छैन । तर, अहिलेको ६ वटा मतपत्रमा हामीले जति नै शिक्षा दिए पनि तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा मत धेरै बदर हुन सक्ने सम्भावना छ । हामी इ–भोटिङमा जान सकेनौँ । दोस्रो, विगतका निर्वाचनमा आयोगले अभ्यास गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रणाली फेर्नका लागि हामीलाई सुझाव आयो । सुझावका आधारमा हामीले २८ र २९ गते मतदानस्थलबाटै मतदाता शिक्षा दिने निर्णय गर्‍यौँ । तर, कतिपय स्थानमा मतदाताले पनि बेवास्ता गरेको देखियो । तेस्रो, हामीले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने भन्यौँ । मतदाता शिक्षासम्बन्धी विभिन्न सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गर्‍यौँ । अलिकति धैर्यता गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षा लिन सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मतदानका क्रममा मतदातालाई कन्फ्युजन भयो भने उहाँको विवेकमाथि तलमाथि हुन नदिने गरी मतदानका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।
मतदानस्थल र मतगणनास्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन कस्तो छ ?
हामीले एकीकृत सुरक्षा योजनामार्फत अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर मतदान केन्द्रहरूको निर्धारण गरेका छौँ । कतिपय स्थानमा अतिसंवेदनशील भनिएका स्थानहरू सामान्य र सामान्य भनिएका स्थानहरू अतिसंवेदनशील हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि हामीले तत्कालको व्यवस्थापनका लागि जगेडा फोर्सको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । सबैभन्दा अगाडि नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले सबैको अनुगमन गर्ने गरी हरेक स्थानमा तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने लागेकै हो । तर, म्यादी प्रहरीलाई पनि तालिम दिएर खटाएका छौँ । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको मूल विषय प्रहरीको संख्याभन्दा पनि हरेक मतदाताको भावना हो । हरेक उम्मेदवार र हरेक राजनीतिक दलको चिन्तन हो । कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गडबड गरेर चुनाव जित्छु भन्ने सोच राख्छ भन्ने कल्पना गरिँदैन । तर, त्यस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुगेका छौँ । हामी सबै अब परिपक्व हुनुपर्छ र लोकमतलाई अवज्ञा गर्ने क्रियाकलाप गर्न हुँदैन भन्ने बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ ।
आयोगले हालसम्म आइपुग्दा मतदानबारे केही आकलन गरेको छ ?
जम्मा मतदातामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विभिन्न कारणले अहिले आफ्नो मतदानस्थलमा हुनुहुन्न । केही छिमेकी देश तथा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकेनौँ । निर्वाचनमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलगायतलाई मतदान गर्न दिन सकेका छैनौँ । स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षकहरूको संख्या पनि त्यसमा जोडिन आउँछ । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा दिँदादिँदै पनि सोचेअनुसार मतदानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्न कि भन्ने चिन्ता छ । अहिले जम्मा मतदाताको २५ प्रतिशत मतदाता आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्न कि भन्ने अनुमान छ । वास्तविक उपस्थित हुने संख्याको विश्लेषण गर्ने हो भने ८० प्रतिशत मत खस्ने आकलन गरिएको छ । तर, समग्रमा हेर्दा न्यूनतम ६५ र अधिकतम ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुन्छ भन्ने अनुमान छ । मौसमले पनि केही असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर, मतदानको अवस्था एकदमै खराब हुन्छ भन्ने छैन ।
मतगणना कसरी गर्नुुहुन्छ ? कहिलेसम्म परिणाम आउँछ ?
मतदान सम्पन्न भइसकेपछि करिब दुई घन्टाभित्रमा लगभग २० प्रतिशत स्थानीय तहका मतपेटिका मतगणनास्थलमा आइपुग्छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । मतपेटिका प्राप्त भएको समयले एक घन्टाभित्र आपसी समन्वय र सर्वपक्षीय सहमति कायम गरी मतगणना प्रारम्भ गर्ने र कुनै पनि ठाउँमा कम्तीमा तीन र बढीमा जति सकिन्छ त्यति ठाउँमा मतगणना गर्ने गरी स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । मतगणनास्थलसम्म पुग्न समय लाग्ने स्थानको मतदाता संख्या कम हुन्छ । महानगरमा कम्तीमा ६ स्थानमा मतगणना गर्ने भन्ने छ । हाम्रो अनुमानमा एउटा वडाको मतगणना गर्न १८ घन्टाभन्दा बढी लाग्दैन । यसरी हेर्दा चार दिनमा मतगणना सकिन्छ भन्ने अनुमान छ । आयोगले करिब तीन सय स्थानीय तहसँग सीधै सिसिक्यामेरामार्फत समन्वय गर्छ । सानोतिनो विवादमा धेरै समय बर्बाद नगरौँ भन्ने आग्रह छ । यसरी हेर्दा पाँच दिनभित्र मतगणना सक्ने हाम्रो तयारी छ ।
आममतदाता तथा उम्मेदवारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आफ्नो शासन गर्नका लागि आफैँ प्रतिनिधि छान्ने यो सुन्दर लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग सबैले गर्नुपर्छ । लोभलालच र अनावश्यक आश्वासन दिनेजस्ता विभिन्न तरिकाबाट तपाईंको मत प्रभावित गर्ने काम हुन सक्दछ । सबै उम्मेदवारको अनुहार आफ्नो विवेकको ऐनामा हेर्नुहोस् । उम्मेदवारबारे चिन्तन तथा विश्लेषण गर्नुहोस् र मतदान गर्नुहोस् । निर्वाचनमा हारजितलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । मतपरिणामलाई लिएर उम्मेदवारहरूबीच कुनै पनि तिक्तता नहोस् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वाभाविक हो भने हारजित पनि स्वाभाविक नै हो । सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम आइरहँदा हार्ने र जित्ने उम्मेदवारले एक–आपसमा अंकमाल गरेका दृश्यहरू देख्न पाइयोस् । निर्वाचनलाई असल राजनीतिक संस्कार र व्यवहार देखाउने अवसरका रूपमा लिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।